Vaovao - Maninona no landy
Ny fitafiana sy fatoriana amin'ny landy dia misy tombony fanampiny izay mahasoa ny fahasalamana amin'ny vatanao sy ny hoditrao. Ny ankamaroan'ireo tombontsoa ireo dia avy amin'ny zava-misy fa ny landy dia fibre voajanahary voajanahary ary noho izany dia misy ireo asidra amine tena ilaina ilain'ny vatan'olombelona amin'ny tanjona samihafa toy ny fanamboarana ny hoditra sy ny famelomana ny volo. Koa satria ny landy dia ataon'ny kankana landy hiarovana azy ireo amin'ny fahavoazana ivelany mandritra ny dingana cocoon-ny, izy io koa dia manana ny fahaizana voajanahary hamoaka ireo zavatra tsy ilaina toy ny bakteria, holatra ary bibikely hafa, ka mahatonga azy io ho hypo-allergenic.
Fikolokoloana ny hoditra sy fampiroboroboana ny torimaso
Ny landy mulberry madio dia misy proteinina biby misy asidra amine 18 ilaina, izay fantatra amin'ny fahombiazany amin'ny famelomana ny hoditra sy ny fisorohana ny fahanterana. Ny tena zava-dehibe, ny asidra amine dia afaka manome otrika molekiola manokana izay mahatonga ny olona milamina sy milamina, mandrisika ny torimaso mandritra ny alina.
Mitroka ny hamandoana sy ny aina
Ny fibroin-landy amin'ny hodi-java-manitra dia mahasalama sy mamindra ny hatsembohana na hamandoana, mitazona anao ho tsara amin'ny fahavaratra sy mafana amin'ny ririnina, indrindra ho an'ireo marary alemà, eczema ary ireo izay mijanona eo am-pandriana mandritra ny fotoana maharitra. Izany no mahatonga ny dermatologists sy ny dokotera manoro hevitra foana ny fandriana landy ho an'ny marary.
Manohitra ny bakteria ary malefaka sy malefaka mahafinaritra
Tsy toy ny lamba simika hafa, ny landy no fibre voajanahary indrindra nalaina avy tamin'ny sombin-tsolika, ary ny tenona dia henjana kokoa noho ny an'ny lamba hafa. Ny sericin voarakitra amin'ny landy dia manakana ny fanafihan'ny kelikely sy ny vovoka amin'ny fomba mahomby. Ho fanampin'izany, ny landy dia manana firafitra mitovy amin'ny hoditry ny olona, ​​izay mahatonga ny vokatra landy ho malefaka sy tsy mitombina.